12 / 10 / 2021 12 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 367 Views စာ0မှတ်ချက် 10236 Ewok ကျေးရွာ, 18 +, 2022, ၇၅၂၉၀ Mos Eisley Cantina, ၇၅၂၉၀ Mos Eisley Cantina, ၇၅၂၉၄ Bespin Duel, 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း, 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship, အဆိုပါ Clone ၏တိုက်ခိုက်, Lego, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego ကောလာဟလ, Lego ကောလာဟလများ, Lego Star Wars, Obi-wan kenobi, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ, Star Wars
အဆိုပါ Lego Group မှဖြစ်ပါသည် ကောလဟာလသတင်းများအရ အထင်ကရမြင်ကွင်းများကိုပြန်လည်ဖန်တီးရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ Star Wars ၂၀၂၂ မှာ၊ ဒါကြောင့်ငါတို့နောက်ထပ်အတွဲငါးတွဲကိုကြည့်ချင်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ကိုးကား၊ လှည့်လည်ရိုက်ကူးထားသောရုပ်ရှင်မျိုးစုံနှင့်ဇာတ်လမ်းတွဲများနှင့် ၁၉၇၇ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိဝေးကွာနေသည့်သရဲကား၊ Star Wars franchise တွင်ချစ်သောဇာတ်ကောင်များပါ ၀ င်သောအမှတ်တရအခိုက်အတန့်များစွာရှိသည်။ ဟိ Lego Group သည်မကြာသေးမီကပရိသတ်နှစ် ဦး အားရည်ရွယ်သည့်မော်ဒယ်တစ်စုံတွင်ဤနှစ်ခုကိုပြန်လည်ဖန်တီးခဲ့သည်။ ၇၅၂၉၄ Bespin Duel နှင့် 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း.
နှင့် အွန်လိုင်းအစီရင်ခံစာများ ဒီတည်ဆောက်မှုအပိုင်းတွေက ၂၀၂၂ မှာဆက်ရှိနေလိမ့်မယ်လို့အကြံပြုတယ်၊ ငါတို့က ၁၈+ အပန်းဖြေဖို့ထိုက်တန်တဲ့နောက်ထပ်ပြကွက်ငါးခုကိုရွေးပြီးပြီ။
၅ - ကံကြမ္မာရဲ့ရန်ပွဲ
Lego ဒီဇိုင်နာများ ဖော်ပြထားသည် နောက်ထပ် prequel trilogy အပိုင်းများအပြင်၊ 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunshipလူ ဦး ရေလုံလောက်ပါက UCS မော်ဒယ်အသစ် ၀ ယ်လျှင်လာလိမ့်မည်။ သို့သော်ပထမ ဦး ဆုံးအချိန်ဇယားအခန်းများကို အခြေခံ၍ တည်ဆောက်သည် Skywalker စစ်ကိုင်း မဟုတ် ကောလဟာလသတင်းများအရ ၂၀၂၂ ap အတွက်စီစဉ်ထားသည်art တစ်ဦးအနေဖြင့် Republic Fighter Tank မှအစီရင်ခံသည်.
သင့် Lego Star Wars နောက်ပိုင်းရက်များတွင် D ၏ ၁၈+ အပန်းဖြေမှုကိုပြန်ကြည့်ပါartNaboo ရှိ Qui-Gon Jinn နှင့် Obi-Wan Kenobi တို့နှင့် Ma Ma တို့၏ထိပ်တိုက်တွေ့မှုသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၇၅၁၆၉ Duel ကိုပိုမိုမြင့်မားသောအသေးစိတ်နှင့်အလုံးစုံစကေးများဖြင့်ချဲ့ထွင်နိုင်သည်။
၄ - Mos Eisley ကို ၀ င်ပါ
နာမည်ကျော် Mos Eisley Cantina ကိုဖမ်းမိနေပြီ ၇၅၂၉၀ Mos Eisley Cantina နှင့်ပိုကြီးတဲ့ ၇၅၂၉၀ Mos Eisley Cantina၊ နောက်ဆုံးတစ်ခုသည်ရှိပြီးသားဖြစ်သည် လူကြီးများအတွက် Lego မော်ဒယ်။ သို့သော်နောက်ထပ် 18+ Lego Mos Eisley ၏ဗားရှင်းသည်စျေးသက်သက်သာသာရှိသောအာကာသယာဉ်မှအခြားမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုကိုယ်စားပြုနိုင်သည်။
Sandtrooper ကင်းလှည့်မှုနှင့် Obi-Wan Kenobi ၏ Jedi စိတ်လှည့်ကွက်သည် ၁၈+ ငယ်များနှင့်အံကိုက်နိုင်သည့်အခိုက်အတန့်ဖြစ်သည်။ Star Wars kit ။ Jedi ကပင်“ ဤအရာသည်သင်ရှာဖွေနေသည့် droids များမဟုတ်” ဟုတည်ဆောက်ထားသည့်အခြေခံအုတ်မြစ်အတွက်ကောင်းမွန်သောကိုးကားချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကောလဟာလသတင်းများအရ အနာဂတ်ဖန်တီးမှုများတွင်ထင်ရှားစေရန်
၃ - Mustafar တွင်တိုက်ပွဲ
မြန်မာနိုင်ငံရှိအထင်ကရလိုင်းများအကြောင်းပြောပါ Star Wars ရုပ်ရှင်၊ “ Anakin ကိုကျော်ပြီးပြီ၊ ငါ့မှာမြေမြင့်ရှိတယ်” Obi-Wan Kenobi ပြောသည့်အတိုင်းရုပ်ရှင်များမှအခြားနာမည်ကြီးအခိုက်အတန့်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။
Jedi နှင့်သူ၏ Padawan ဟောင်း Anakin Skywalker တို့အကြားထိပ်တိုက်တွေ့မှုအတွင်းမြင်ကွင်းသည်မြင်ကွင်းသည်အနာဂတ်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ Lego Star Wars ၁၈+ သတ်မှတ်ထားသည်။ မူစတာဖာ၏ချော်ရည်များ၊ စက်ပစ္စည်းများနှင့်မြေပြင်အနေအထားရောထွေးမှုတို့ကလိုက်ဖက်ညီကြောင်းသက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည် Lego အုတ်မဝင်မီ Mustafar အပေါ် 75269 Duel - မကြာမီထပ်မံရရှိနိုင်မည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည် bundle အသစ်.
၂ - Ewok ပွဲ
ငါတို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခု Lego Star Wars Force Ghost minifigures သည်နောင်တွင်aဖြစ်နိုင်သည် လူကြီးများအတွက် Lego သတ်မှတ် Endor နှင့် Ewok Village ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၀၂၃၆ Ewok ကျေးရွာ၌ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ထိုပုံစံသည် Death Star ၏ဖျက်ဆီးခြင်းကိုဆင်နွှဲသောသတ္တဝါတို့၏ခြေရင်းအိမ်ကိုအခမ်းအနားတစ်ခုတွင်တွေ့ခဲ့ရသော်လည်းသဘာဝလွန်ရုပ်သေးရုပ်များမပါဘဲဖြစ်သည်။
၎င်းအားဖြန့်ချိသောအခါ ၁၀၂၃၆ Ewok Village သည်ယူရို ၁၉၉.၉၉ / ဒေါ်လာ ၂၄၉.၉၉ / € ၂၄၉.၉၉ ဖြစ်သည်။ Yoda, Anakin Skywalker နှင့် Obi-Wan Kenobi ကဲ့သို့ Force Ghost minifigures များရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်အခိုက်အတန့်ကိုပိုမိုသေးငယ်စေပြီးပိုမိုသက်သာသောမြင်ကွင်းကိုပြန်လည်ဖန်တီးနိုင်လိမ့်မည်။ Lego VIDIYO ပြီးသားရှိပါတယ် ငါတို့ကိုဆောင်ခဲ့တယ် ပန်းတိုင်နှင့်ပိုနီးစပ်သည် Lego ဒီဇိုင်နာများက၎င်းတို့ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည် 'စားပွဲပေါ်မှာ'.
၁ - Geonosis လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်
နောက်ထပ်တစ်ခု prequel trilogy ပာ စိတ်ဝင်စားစရာ 18+ မော်ဒယ်အတွက်ဖြစ်စေနိုင်သောမြင်ကွင်းမှာ Attack of the Clones တွင်နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ရသော Geonosis Arena ဖြစ်သည်။ ဒီနေရာကိုမူလက Anakin Skywalker, Padme နှင့် Obi-Wan Kenobi တို့အတွက်နောက်ဆုံးအပန်းဖြေနေရာတစ်ခုဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးသုံးယောက်လုံးကိုကယ်တင်ရန်စစ်မြေပြင်၌ Jedi, Droids နှင့် Clones များနှင့်အတူရေလွှမ်းခဲ့သည်။
နှင့် ကောလာဟလများ ၂၀၂၂ အတွက်ရွေးချယ်ခြင်းခံရသော Death Star တုတ်ကျင်း၏ Star Wars အကွာအဝေး၊ နယ်ပယ်တစ်ခုတွင်အသေးစားအပန်းဖြေမှုများသည် minifigures များစွာကိုမလိုအပ်ဘဲကွင်း၏စကေးနှင့်အသေးစိတ်ကိုဖမ်းယူနိုင်လိမ့်မည်။
← Lego Star Wars Death Star trench run set သည် ၂၀၂၂ အတွက်ကောလဟာလဖြစ်သည်
Marvel Guardians of Galaxy ဒါရိုက်တာသည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော LEGO minifigure ကိုမီးမောင်းထိုးပြသည် →